3d Marble Kuveza, Marble Column, Marble Pattern - Morningstar
iwe uchagara uchipihwa iko kwechokwadi kukosha kwematombo echisikigo
Runako rwebwe rechisikigo rinogara richisunungura kunaka kwaro kusingafadzi uye huroyi
YEMAZWI Dombo Kuunganidzwa
Sezvo isu tese tichiziva, marble yakanaka yegiredhi chigadzirwa.Saka mhuri zhinji dzinoshandisa machena mune yavo yekushongedza, uye marble ine chaiwo marble uye faux marble. Uye kunyangwe iri yemarble yekugadzira kana natu ...
29 Zvita, 2020
Vanhu vazhinji uye vazhinji vanosarudza kushandisa machena machena nekuda kwechitarisiko chayo chakanaka uye akawanda akanaka maficha. Chekutanga, kukwirira kuomarara Haisi nyore kushanduka.Natural marble ndeyekupfuura makore marefu kuumba ...
15 Zvita, 2020
Iko kushandiswa kwemidziyo yemuchadenga kuri kugara kuchiunza izvo zvitsva, uye zvakasiyana siyana zvekuvakisa zvakapinda zvishoma nezvishoma mumuono wedu. Runako rwemabhuru haruna kudzikira kubva panguva dzekare. Iyo marble o ...
09 Zvita, 2020
Xiamen Morningstar Stone Co, LTD yakavambwa muna Mbudzi 23, 2017 uye yakanyoreswa muXiamen, guta rakanaka rechitsuwa, rinonyanya kuverengerwa mumarudzi ese emarble emazuva ano, granite, akakomberedzwa-akaumbwa, nezvimwewo ...
24 Gunyana, 2019
Unogona kutaura nesu pano uye tichava nemumwe munhu anodzokera kwauri munguva pfupi!